Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Njem US: mmachi njem EU na -akụda mmụọ
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Njem bụ akụkụ dị mkpa nke akụ na ụba ụwa, ọ ga -adịkwa mkpa maka mgbake zuru oke site na mbibi akụ na ụba nke ọrịa.
European Commission na -atụ aro mmachi njem maka ndị njem US na EU.
Ọtụtụ mba EU nwere mmụba na nleta mbata na mbata n'oge ọkọchị a.
Njem njem US na -agba EU ume ka ọ dịrị ndị America gbara ọgwụ mgbochi ọrịa.
Onye isi oche ndị njem US Njem Onye Isi Ọha na Ọha na Ọha Tori Emerson Barnes wepụtara nkwupụta na -esonụ ozi ọma na European Union na -atụ aro iwepu United States na ndepụta mba nke ekwesịrị ịkwalite mmachi njem:
“Nke a bụ mmechuihu na -esochi mmụba nke nleta ndị mbata na ọpụpụ nke ọtụtụ mba EU nwetara n'oge ọkọchị a. Ọ bụ ndọghachi azụ n'agbanyeghị nnabata ọgwụ mgbochi - ngwa ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma megide ụdị dị iche iche - nke na -arị elu n'akụkụ abụọ nke Atlantic.
“Njem njem bụ akụkụ dị mkpa nke akụ na ụba ụwa, ọ ga -adịkwa mkpa maka mgbake zuru oke site na mbibi akụ na ụba nke ọrịa. Njem US na -agba ndị EU ume ka ha ghe oghe maka ndị America gbara ọgwụ mgbochi, ma na -agbakwa United States ume ka ha mee ihe ozugbo ịmalite ịnabata ndị ọgwụ mgbochi na iweghachi akụ na ụba njem anyị. ”
Ndị ọrụ European Union taa atụ aro ịkwụsịtụ njem niile na-adịghị mkpa na United States ka ọnụọgụ ikpe COVID-19 ọhụrụ US na-agbago.
Taa mara ọkwa site na European Council bụ nkwanye aka na mba iri abụọ na asaa nke otu a, nke na -ejigide ikike ịchị oke ala ha.
Michale K. ekwu, sị:
September 9, 2021 na 14: 15
Ọ dị mma, US machibidoro ndị njem Europe iwu otu mmachi ahụ (tupu UE emee) na mbido afọ gara aga, ọ ka dịkwa.
Akụkụ abụọ a na -akụda mmụọ.
Susan Sheats ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 30, 2021 na 16:42
hmmm… Echere m na ọ bụ naanị nkwanye mba ọ bụla nwere ike ijikwa otu ọ masịrị ha. Italytali enyela iwu ịgba ọgwụ mgbochi, ihe mkpuchi na oghere ọha niile yana ule covid na -adịghị mma. Ọ bụrụ na mba ndị ọzọ nakweere ntuziaka ndị ahụ, ha ga -abụ ihe ezi uche dị na ya ma nyere aka mee ka obi sie onye ọ bụla ike na nchekwa. Enwere ike ịtụgharị nkwupụta a ka ọ bụrụ ihe dị mma maka ndị njem nwere akọ na uche yana ozi nye ndị jụrụ ịtụle nchekwa nke ndị ọzọ ka ha nọrọ n'ụlọ.